I-Photoshop ngoku iyafumaneka kwi-Macs nge-M1 chip | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Los IMac ene-chip entsha ye-M1 sele ingathembela kwi-Adobe Photoshop emva kokubhengezwa akwenzi nto ngeAdobe. Kwaye yinyani yokuba banokuba ne-Photoshop esebenzisa i-chip entsha, ekhokelela ekusebenzeni okuphuculweyo.
Kwaye asithethi ngokuphucula into, kodwa Kuphela ngama-1,5 amaxesha xa kuthelekiswa nale nkqubo kunye naleyo yezizukulwana ezidlulileyo kunye noqwalaselo olufanayo. Ngokuqinisekileyo ukuba abo bane-Mac kunye ne-Apple Silicon baya kuyazi indlela yokuxabisa kumlinganiso wabo le nto intsha ivela kwi-Adobe.
Phakathi kwezinto ezintsha eziphucula ngokufanelekileyo okusemgangathweni Iichips ze-M1 ezintsha kunye neAdobe Photoshop sinokuxhomekeka kuphuculo isantya sokhetho, amacebo okucoca ulwelo kunye nokusebenza kumanqanaba ngokubanzi.
Oko kukuthi ukusukela ngala mhla wanamhlanje I-Adobe Photoshop isebenza ngokwendalo kwiiMacs nge-M1 chip kwaye uyisebenzise ukuze wandise ukusebenza. Eso santya sikhokelela kumaxesha e-1,5 okuphuculwa ngokuthelekiswa neenkqubo zangaphambili kunye noqwalaselo olufanayo, kwaye njengoko i-Adobe ngokwayo ibeka izimvo, yenza iimvavanyo zokuvula nokugcina iifayile, ukwenza iifilitha kunye nemisebenzi yokubala ebanzi enje nge-Content-Based Fill and Select. Isihloko.
Le misebenzi ngoku ibaleka ngokukhawuleza kwaye nokuqalisa kuyakhawuleza. Ngaphandle kwalonto basebenza kunye neApple ukuphucula ukusebenza phantsi kwezi chips ze-M1. Kwaye eneneni i-Adobe iyabulela kubasebenzisi abathe bathatha inxaxheba kwi-beta ye-Photoshop kwezi chips kwaye bancede ukuze namhlanje sikwazi ukuthi sele iyinzalelwane yethu.
Ewe kunjalo, khankanya ukuba zimbini imisebenzi ekusafuneka yenziwe: isimemo sokuhlela amaxwebhu efini, kunye nokunxibelelanisa ukuseta kwangaphambili. Ukuba usebenzisa ezi zinto zimbini, iAdobe icebisa ukuba ubuyele kwiFotohop kwiRosetta 2 ide ihlaziye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Idizayini yeMifanekiso » I-Adobe Photoshop sele ikhona kwiiMacs ngeApple Silicon
Yintoni entsha kwiAdobe yeFotohop kwi-iPad kunye neSigqibo esiPhezulu seKhamera eluhlaza kunye neLightroom
Indlela yokuhambisa isikhumba kwi-Photoshop